🥇 ▷ Vector HD ciyaar adag oo cajiib ah oo loogu talagalay ipadka [Review] ✅
Vector HD ciyaar adag oo cajiib ah oo loogu talagalay ipadka [Review]
Maanta TodoiPhone waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegida ciyaarta cajiibka ah ee cajiibka ah ee loogu talagalay ipadka loo yaqaan ‘iPad’ oo loogu talagalay kooxda soo saareyaasha Nekki, waxaan ka hadleynaa ciyaarta Vector HD.
Vector HD waa ciyaar xiise leh oo leh naqshad cajiib ah oo aadan seegi karin ipadkaaga, taas oo kugu qasbanaan doonta inaad soo bandhigto awoodaada oo dhan inaad ku ordo oo aad ku booddo, qaabka parkour ugu fiican, iyada oo loo marayo dhismayaasha labadaba bannaanka iyo gudaha, dhammaantood Ka fogow qabashada.
Xirfaddaada waxaad la kulmi doontaa caqabado kaladuwan oo fallaadho ayaad awood u yeelan doontaa inaad sameyso dhaqdhaqaaqyo cusub iyo isku-duwayaal si aad u kasbato dhibco dheeraad ah, tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad ka faa’iideysato raacdeyaashaada oo ku qalabaysan hubka dabka korantada iyo haddii ay aad ugu dhowaadaan Waxay kuu curyaaminayaan si ficil ahaan ah iyagoo aan ku taaban.
Vector waa ciyaar xiiso badan oo qaab cayaareed leh adiga oo ah orodka aan caadiga ahayn ee nidaamka uusan qaban doonin. Ciyaartu waxay ku furmeysaa aragti guud oo dunidoo dhan halkaasoo xorriyadda shaqsiyeed ay tahay wax aan ka aheyn riyo fog. Laakiin wadnaha fredarener waa xoog badan yahay, oo dhakhso badan xor ah. Orod, faan, boodh iyo fuulid iyadoo la adeegsanayo farsamooyin aan caadi ahayn oo ku saleysan isboortiga ninja ee magaalada Parkour dhamaantiis markii uu ceyrsanayay “Big Brother”, kaas oo ujeedada kaliya ay tahay in la qabto oo dib loo soo celiyo.
Waxaa dhiirigaliyay howsha iyo mabaadii’da Parkour, oo ku qalabeysan kontaroolka fekerka dareenka leh ee dhamaan heerarka iyo naqshadeynta qafiifka ah si ay uga hortagaan ciyaartoy aad ugu baahi badan oo leh halxirasho u baahan isweydaarsi deg deg ah halka raadku “ku qulqulayo” dusha sare.
Ciyaarta Arcade-qaabka ka timid abuurayaasha ciyaarta ku dhuftay Facebook
Waxaa dhiirrigaliyay Parkour.
Si la yaab leh waa macquul oo leh dhaqdhaqaaqyo macquul ah, oo ay suurto gal ku tahay aaladda animada cascadeur
Inka badan 30 heerar cajiib ah oo adag, oo leh wax badan oo dheeri ah oo leh cusboonaysiin kasta
Si dhakhso leh wax loo barto, oo ay adag tahay in la yaqaan
Sidoo kale waxaa diyaar u ah iPhone iyo Facebook!
Vector HD waxaa laga heli karaa App Store-ka wuxuuna la jaan qaadi karaa ipadka. Wuxuu ubaahanyahay macruufka 3.2 ama wixii ka dambeeya. Waxay ku qoran tahay luuqadda Ingiriisiga.